MPT Myanmar | Moving Myanmar Forwardထောဘီ - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
“ဤဝန်ဆောင်မှုအား ရယူအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် အောက်ဖော်ပြပါ link တွင် ဖော်ပြပါရှိသော နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသည့် MPT ၏ အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။”
သင့်ရဲ့ဖုန်းဘေလ်ကို (၅)ဆထိ ပြောင်းလိုက်ပါ။
ထောဘီနဲ့ဆို ရက်ရှည်ရှည် သုံးလို့ရပါပြီ။
ထောဘီဖုန်းဘေလ် ၅၀၀၀ကျပ်ဖြင့် အများဆုံး MPT-MPT ဖုန်းခေါ်ရန် ၁၅၃ မိနစ်(သို့) အင်တာနက်သုံးရန် 467 MB(သို့) MPT-MPT SMS ပို့ရန် အစောင် ၂၅၀ ရရှိအသုံးပြုနိုင်ပါမည်။
ထောဘီ ဆိုတာ ပိုကောင်းတဲ့ ပရိုမိုရှင်း အစီအစဉ်ပါ။ ထောဘီ နဲ့ဆို ကိုယ့်ဖုန်းဘေလ်တွေကို ၅ ဆ ပြောင်းပြီး ရက်ရှည်ရှည်သုံးနိုင်ပါပြီ ထောဘီ ဖုန်းဘေလ် နဲ့ဖုန်းပြောမလား အင်တာနက်ပဲသုံးမလား SMS တွေပဲပို့မလား – ကြိုက်သလိုသုံးလို့ရတယ်လေ။
MPT4U Application မှတစ်ဆင့် လွယ်ကူစွာရယူနိုင်ပါသည်။
– ထောဘီဖုန်းဘေလ် အဖြစ်ပြောင်းခြင်း
၁၀၀၀ ကျပ် ၅၀၀၀ ကျပ် ၁၅ ရက် *5001# 1332 သို့ 1000 ဟုပေးပို့ရန် *500# *224#
၂၀၀၀ ကျပ် ၁၀၀၀၀ ကျပ် ၃၀ ရက် *5002# 1332 သို့ 2000 ဟုပေးပို့ရန်
၅၀၀၀ ကျပ် ၂၅၀၀၀ ကျပ် ၆၀ ရက် *5005# 1332 သို့ 5000 ဟုပေးပို့ရန်
၁။ ဆွေ/ရှယ်/ရွှေ အစီအစဉ် ရယူထားသော MPT GSM/WCDMA prepaid စနစ် (လက်ရှိ) ဖုန်းအသုံးပြုသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၂။ CDMA၊ Postpaid၊ Base Tariff နှင့် လက်ရှိအသုံးမပြုနေသူများ ရယူအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၃။ MPT4U app (သို့) *500# ကိုခေါ်ဆို၍ ထောဘီပက်ကေ့ချ်ကို စိတ်ကြိုက်လဲလှယ်ရယူနိုင်ပါသည်။
၄။ ထောဘီဖုန်းဘေလ်ကို ဒေတာ၊ MPT ဖုန်းအချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုရန်နှင့် စာတိုပေးပို့ရန် သတ်မှတ်နှုန်းထားများဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၅။ အကြိမ်အကန့်အသတ်မရှိဝယ်ယူနိုင်ပြီး ထောဘီဖုန်းဘေလ်များပေါင်းစည်းကာ အရှည်ဆုံးသက်တမ်းထိ သက်တမ်းတိုး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၆။ ထောဘီဖုန်းဘေလ် (၅ဆ)၊ ထောဘီ ၇ဆ နှင့် ထောဘီ ၁၀ဆ ဖုန်းဘေလ်များကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၇။ ထောဘီဖုန်းဘေလ်ဖြင့် ပက်ကေ့ချ်များမဝယ်ယူနိုင်ပါ။
၈။ ထောဘီဖုန်းဘေလ်ကို လွှဲပြောင်းမှုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ပုံမှန်ဖုန်းဘေလ်နှင့် ပြန်လည်လဲလှယ်ခြင်းမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
၉။ MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ၂၀စက္ကန့်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို 200KB နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံပါမည်။
၁၀။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းဖြင့် ထောဘီပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူ၍ “ထိတိုင်းထော/ ထောဘီထိပေါက်” ကံစမ်းခွင့် (၁) ကြိမ် ရယူ၊ ဂိမ်းကစားပြီး ထောဘီဖုန်းဘေလ် အဆပေါင်း ၁၀၀ အထိ ရရှိနိုင်ပါသည်။
၁၁။“ထောဘီထိပေါက် (ထိတိုင်းထော)”ဂိမ်းမှ ရရှိထားသော ထောဘီဖုန်းဘေလ်ကို ဒေတာ 10.7Ks/MB၊ MPT ဖုန်းများသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုရန် 32.5Ks/min နှင့် MPT ဖုန်းများသို့စာတိုပေးပို့ရန် 20Ks ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
1) Htaw B ဆိုတာဘာပါလဲ?
2) Htaw B ဖုန်းဘေလ်ကို ဘယ်သူတွေ ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ?
MPT ဖုန်းများ၏ Prepaid စနစ် (ဆွေသဟာ(သို့)ရှယ်ပြော(သို့)ရွှေစကား) အစီအစဉ်အသုံးပြုသူများအားလုံး ထောဘီဖုန်း ဘေလ်များ ကို အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။
3) Htaw B ဖုန်းဘေလ်ကို ဘယ်လိုရယူ အသုံးပြုနိုင်မှာပါလဲ?
4) Htaw B ဖုန်းဘေလ်ကို ဘယ်လောက်ကြာကြာအသုံးပြုနိုင်မှာပါလဲ။
Htaw B ဖုန်းဘေလ် ၅ဝဝဝကျပ်ကို (၁၅)ရက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
Htaw B ဖုန်းဘေလ် ၁ဝဝဝဝကျပ်ကို (၃၀)ရက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
Htaw B ဖုန်းဘေလ် ၂၅ဝဝဝကျပ်ကို (၆၀)ရက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
5) Htaw B ဖုန်းဘေလ်ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်မှာပါလဲ။